डायमण्डसम्शेर राणाले त्रिभुवन,महेन्द्र र वीरेन्द्र तीन राजालाई यस्तो सल्लाह दिएका रहेछन् ! « Pana Khabar
डायमण्डसम्शेर राणाले त्रिभुवन,महेन्द्र र वीरेन्द्र तीन राजालाई यस्तो सल्लाह दिएका रहेछन् !
समय : 12:33 am
डायमण्ड सम्शेर नेपाली साहित्यकार तथा ऐतिहासिक उपन्यासकार हुन।पाल्पामा जन्मेका यिनले नेपाली साहित्यमा राणाकालिन पृष्ठभूमिमा ऐतिहासिक उपन्यासहरू लेखेका छन्। उनको उपन्यास “बसन्ती”मा आधारित चलचित्र निर्माण भईसकेको छ भने उनका अर्को उपन्यास “सेतो बाघ” नेपालको ऐतिहासिक उपन्यास जगतमा एक उत्कृष्ट उपन्यासको रूपमा लिने गरिन्छ। सेतो बाघमा राणाकालिन षड्यन्त्र तथा शक्ति संघर्ष देखाइएको छ। यसमा जंगबहादुरका सन्तानहरू कसरी शक्तिबाट हटाइए भन्ने वर्णन गरिएको छ। सेतो बाघ अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च लगायत विश्वका विभिन्न भाषामा पनि अनुवाद भएको छ।
राणा दरवारभरि थुप्रै सुसारे,प्रसश्त सम्पत्ति बंगाली शिक्षकको ज्ञान अनि भान्सादेखि घोडा बाध्ने तवेलासम्म विलासीपूर्ण अल्लारे जीवन बिताएको ठिटो डायमण्ड सम्शेर राणा अर्थात बालनरसिंह कुवरका कान्छा छोरा जंगबहादुर राणाका भाई धिर सम्शेरका सत्र भाई छोरा मध्ये चौथौं छोरा शेरसम्शेरका नाती हुन्,डायमण्ड सम्शेर।
जर्नेलका छोरा कर्नेलका नाती अनि १६ बर्षको उमेरमै पदेन सेनाको लप्टन भएका थिए डायमण्ड सम्शेर।
राणा परिवारकै डायमण्ड सम्शेरले राणा शासन विरुद्ध नै आन्दोलनमा भाग लिएका थिए।
डायमण्ड सम्शेरले राजा त बेलायतको जस्तो हुनुपर्छ। अधिकार खोज्ने राजा विश्वमा कतै टिकेकै छैन,डायमण्ड सम्शेरले यस्तो सल्लाह राजा त्रिभुवन,महेन्द्र र वीरेन्द्रलाई समेत धेरै पटक सल्लाह दिएका थिए। तर प्रजातन्त्र प्रति प्रतिवद्ध राजा वीरेन्द्रलाई काम गर्न नदिने नारायणहिटि दरवारमा धेरै रहेछन्। राणाले बताए।
राणाको प्रश्न छ-‘नेताहरुलाई गर्ने गालीगलौज नै प्रजातन्त्र हो।जनताले नेतालाई कालो झण्डा देखाउनु नै नागरिक स्वतन्त्रता हो। नत्र के-को प्रजातन्त्र ? राणा शासन र प्रजातन्त्रमा के फरक?’
हेर्नुहोस् राणासँगको कुराकानी